DHIBAATOOYINKA KU JIRA GURIGA: RAPTOR, WEERARKA, IYO KUWA KALE - GURI, GURI
Dib u eegista ugu waxtarka badan! Dhibaatooyinka ku jira guriga: Raptor, weerarka, iyo kuwa kale
Qaxoontiga gudaha - dhibaato weyn
Cayayaanka yar yar qaniinyo qaniinyo badan oo dhaqso ah.
Oo halkan, si ay u keenaan "deriska" waa inay si adag u shaqeeyaan.
Cay kasta oo cayayaanka ahi maahan mid ku habboon burburinta dhiqlaha!
Noocyada sunta cayayaanka ladagaallanka ah
Diyaargarowgu waa monopages oo si gaar ah ugu diyaara dhiig, sidaas darteed ma jirto wax dhibic ah oo la isticmaalo bac.
Noocyada soo socda ee sunta cayayaanka ayaa loo adeegsadaa waxyaabahan "vampirchikov":
boodh. Waxay u kala firdhaan si ay u baabi'iyaan dirxiga iyo cawska oo ku quudiya qashinka organic;
buufin iyo buufin. Cayayaanka waxay jidhka ku galaan mareenka neef-mareenka, si dhaqso ah oo waxtar leh u dhaqma;
joojinta iyo budada. Miisaaniyaddan waxay ku dhex mari kartaa daboolka dibadda ee boodada waxayna ka sumeyneysaa gudaha. Waxay ku dhaqmaan wax ka badan daawooyin, sidaas darteed waxay awood u leeyihiin inay si buuxda u tirtiraan weerarka.
Xeryaha loo yaqaan 'Organophosphorus' iyo walxaha ka soo jeeda kooxda pyrethroid ee boodada. Waxay carqaladeeyaan nidaamkii habdhiska dareenka adoo joojiya dareenka siyaabo kala duwan.
Dhibaatooyin mira dhal ah
Laga soo bilaabo boodada ayaa kaa caawin doona inaad ku buufisid, burburinta isku dhafka cayayaanka oo dhan. Liiska waxaa ka mid ah maahan kaliya dhiig-miirayaasha, laakiin sidoo kale baranbaro, bartamaha, quraanjada, dhiqle ah iyo Bastoolad.
Diyaarinta waxaa ku jira inta badan 3 waxyaabood oo firfircoon: pyrethroids tetramethrin iyo cypermethriniyo sidoo kale iyaga piperonyl butoxide synergist. Sidaa darteed, boodada waxay helayaan laba xabbadood oo kordhay, taas oo ay leeyihiin fursado badan oo looga hortagayo. Cadaadinta daaweynta, dhiig-baxayaasha waxay helayaan curyaannimo kadibna waxay u dhintaan.
Cayayaanka la heli karo ee dhalooyinka birta ah ee 350 ml. Tani waa ku filan in lagu daboolo 35-45 mitir murabac ah aagga sumaysan.
Cayayaanka waa wax yar oo sun ah dadka iyo xayawaanka raba. Maaddooyinka ay ka kooban yihiin ee jirka ee xayawaanka-diiriyaasha ayaa si deg deg ah u kala jajabiyay xubnihii ay ku jiraan oo aan waxyeello u geysan. Haddii ay la xiriirto xuubka xuubka, aerosol wuxuu keeni karaa cuncun, sidaas darteed, marka la isticmaalayo, taxaddarrada badbaadada waa in la raaco.
Qiimaha celceliska aerosol waa mid la aqbali karo - hal dhalo kharashka kudhowaad 150-170 roon.
Caymis kale oo lagu kalsoonaan karo oo la isku halleyn karo si loo caawiyo in laga takhaluso qolalka aan fiicnayn ee guriga. Falalka ka dhanka ah dhismaha cayayaanka weyn - labadaba duulaya iyo gurguurashada.
Waxyaabo firfircooni ah ayaa ka kooban pyrethroid cypermethrin. Maaddadani waa sunta guud ee dila inta badan cayayaanka. Dadka iyo xayawaanka kale ee diirran. daroogadu waxay ku dhowdahay amaan.
Cayayaanka aan la burburin shucaaca ultraviolet iyo heerkul sarreeya. Waxay awood u leedahay in ay sii dheeraato muddada dheer ee la daweeyey, sii wadida in ay burburiso cayayaanka.
Aerosol ayaa leh caraf udgoon., waxaad dooran kartaa badeeco leh urta gawaarida gu'ga, orange-ga ama lavender. Waxaa laga heli karaa 300 ml oo biraha biraha ah.
Khasaarida ugu weyn: daroogada ayaa ka baxda calaamadaha cadcad ee ku yaal alaabta guriga iyo sagxadahakuwaas oo u baahan in la maydho biyo saabuun iyo soodh.
Celcelis ahaan qiimaha Ruushku waa 170-190 Rufan halkii dhalo. Isla mar ahaantaana qalabku waa mid dhaqaale: hal dhalo ayaa ku filan in lagu buufiyo guri dabaq ah oo laba qol ah.
Daadi wuxuu leeyahay saameyn balaadhan oo aad u ballaadhan, baabi'inta dhammaan cayayaanka guriga lagu xannaaneeyo. Halabuurka daroogada waxaa ka mid ah 2 qaybood oo firfircooni ah hal mar: pyrethroids cyphenothrin iyo imiprotrin. Waxay u dhaqmaan habka dareemayaasha ah ee boodada, taas oo keeneysa dhimashadooda degdeg ah.
Aerosol ayaa diyaar ah ee biraha wuxuu awood u leeyahay 400 ml. Waxaa lagu qalabeeyaa maqaallo casri ah oo dheera kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku buufiso jeermiska xitaa meelo aad u adag. Si aad u sameysid guri laba qol ah, waa ku filan inaad hesho mid ka mid ah Kombat.
Dareen-celinta xasaasiyadeed ayaa laga yaabaa inay ku dhacdo dadka iyo xayawaanka ka dib marka la dalbado sheyga, sidaas awgeed cayayaanka ayaa la buufiyaa keliya haddii taxaddarrada la qaado.
Qiimaha celceliska ah ee La-dagaallanka Kala-duwanaanshaha waa kala duwan yahay laga bilaabo 210 ilaa 240 rubi gobollo kala duwan.
Emulsion-ku-dhex-dhexaad ah oo qaab ah dareer cad. Waxaa loo adeegsadaa in lagu baabi'iyo inta badan baayacmushtarada gudaha: boodada, dhiqle ah, quraanjada, kaneecada, baranbaro, duqsiyo.
Qalabka waxaa loo qaabeeyay lana soo saaray Nederland. Waxaa ku jira chlorpyrifos sida qayb firfircoon, iyo sidoo kale cadar iyo emulsifiers. Fiirinta walaxda firfircooni waa 48%taas oo kuu ogolaanaysa inaad heshid tiro badan oo ah xal shaqo.
WARBIXIN! Chlopyrifos waa unug jirka ah oo ka kooban organophosphorus. Marka la eego jidhka boodada, waxay ka horjoogsataa qalabka enzymes lagama maarmaanka u ah gudbinta dareenka iyada oo loo marayo nidaamka dareenka. Sababtoo ah gariir, ka dibna curyaamid iyo dhimasho.
La sii daayay ee dhalooyinka caaga ah oo leh awood 1 litir. Si aad u baabi'iso boodada shaqaynta waxaa lagu diyaariyaa heerka 4.7-5 g halkii litir oo biyo qabow ah. Miisaanka kaneecada ee taangiga ayaa ku filan in uu si buuxda u buuxiyo guryo badan.
Qolalka diirran ee guryaha diirimaad leh, cayayaanka waa sun yar. Isaga oo lagu daray fasalka 3aad ee khatarta.
Kharashka daroogada waa mid aad u sarreeya, waxay ku kala duwan yihiin qiyaasta 2.4-2.7 kun oo gaas ah.
Mid ka mid ah daroogooyinka cusub ee ugu wax ku oolka badan.burburinta cayayaanka guriga. Waxay isku wada jiraan chlorpyrifos, laakiin waa qaab ka joojin isku mid ah.
Walaxda firfircoon waxay kuxirantahay qolof polymer, oo ku yaalla dhexdhexaad dhexdhexaad ah. Thanks to this qalabku aad ayuu u adkeyn karaa waxkasta oo waxyeellada leh wuxuuna shaqeyn karaa dhowr toddobaad oo isku xiga.
Fiirinta walaxda firfircooni waa 25%. Si loo soo saaro dheecaan shaqeynaya waxaad u baahan tahay inaad isku qasiso 100 ml oo ah badeecada iyo 1.5 litir oo biyo qabow ah. Xalku ma dharbaaxo maacuun mana ka tago lebbiska muraayadaha.
Gudaha boodhka ayaa ku dhex jira habka xidhiidhinta, si dhakhso ah u galaan daboolka dibadda ee jirka. Intaa waxaa dheer, waxay uubeysaa cayayaanka oo loo wareejiyaa buulka, oo ku dhibaateeya dadka kale.
MUHIIM! Helitaanka waxaa isticmaala adeegyo xirfad leh si loo xakameeyo goobaha cudurka qaba.
La sii daayay ku dhalo caag yar oo leh caag yar. Lama huraan oo waxaa lagu keydin karaa wakhti dheer ka dib furitaanka. Awoodda hal dhalo - 100 ml.
Haddii aad soo iibsato alaab tayo leh oo soo saaraha soo saaraha, waa inaad lacag ku bixisaa! Ka dib dhan, cayayaanka ah waa qaali - laga bilaabo 700 RUB halkii dhalo. Run, sida caadiga ah iibka hal mar ayaa ku filan in la burburiyo dhammaan dadweynaha boodhadhka gudaha. A dhalo joojin ah ayaa ku filan inaad ku buufiso 120-150 mitir murabac.
Mid ka mid ah habka ugu badbaado ee qof iyo xayawaankiisa. Pyrethrum waa saliid laga soo saaray Dalmatian Chamomile.. Haysashada suntan qaas ah ee cayayaanka, waa gabi ahaanba aan waxyeello u laheyn xayawaanka iyo aadanaha. Xitaa haddii ilmuhu ama ubax uu dhadhamo sida budo, wuu soo kabsanayaa.
Kalluun waxaa loo isticmaali karaa mid ka mid ah labada siyaabood:
kala-diridda cayayaanka ee biyaha qabow, ku shub dhalada buufinta iyo boodada buufinta ee deegaankeeda;
Isticmaal budo qallalan, oo ku sii daa lakab khafiif ah.
Waxaad ka iibsan kartaa maceeshada farmashiyaha ama dukaanka internetka. Kharashkoodu waa hooseeyaa oo dhanna waa la heli karaa. Qiimaha celceliska waa 60-80 Rufid sanduuq 300 g ah.
Waxyaabaha xirfad leh ee qaabka fayo-dhawrka emulsion. Waxaad ka iibsan kartaa oo kaliya adeegyada gaarka ah. Qalabku waa mid aad waxtar u leh, laga bilaabo markii ugu horeysay ee laga tirtiro dhammaan cayayaanka waxyeellada ku nool ee guriga.
Walaxda ugu muhiimsan waa deltamethrin oo ka socda kooxda pyrethroids, waxaa kordhay by synergists.
Halbeegga ayaa sidoo kale ka mid ah adhesives, oo leh cayayaanka dilaaga si adag u adkaeya ​​lugaha iyo dharbaaxada boodada.
Sidaas daraaddeed isagu ma aha oo kaliya meydka, laakiin sidoo kale galaan buulkeedii, burburinta dulinyada kale.
DAREEN! Biorin waa sun badan! Marka la shaqeynayo isaga waa in uu ahaado mid aad u taxadar leh iyo taxadar kasta!
Waxaa laga helaa dheriga caagagga caaga ah. Qiimaha cayayaanka ayaa ku dhawaad ​​2 kun oo riwaayad ah.
Iyada oo gacan laga helayo daawooyinka casriga ah ee casriga ah, dagaalka ka soo horjeeda boodada waxay ku dhammaaneysaa guul gaar ah oo aan shuruud ku ahayn dadka sharciga ah ee guriga. Kaarsi faraxsan!